စီးပွားရေးအတွက် Twitter တွစ်တာ (၁၀) ခု | Martech Zone
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စီးပွားရေးတွစ်တာ (၁၀) ခု
တနင်္ဂနွေ, မေလ 10, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်သည်ဆက်သွယ်ရေးကို အသုံးပြု၍ စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်ကိရိယာအနည်းငယ်သာစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည် တွစ်တာ သို့မဟုတ်သူတို့၏ကုမ္ပဏီအတွင်း၌ micro-blogging အသုံးပြုခြင်းအတွက်
ငါတွန်းအားပေးစီမံခန့်ခွဲလေ့ရှိတယ် Martech Zone အစာ Twitter ကိုအသုံးချဖို့ twitterfeed။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်သော webinar တစ်ခုတွင် Twitterfeed ကိုသရုပ်ပြသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကုန်အချို့သို့ရောက်သောအခါကြည့်ရှုသူအချို့ကအခြားကောင်းမွန်သောကိရိယာများရှိကြောင်းဝေမျှကြသည်။ ငါကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်!
အတိအကျလူမှုရေးရည်မှန်းချက်များ (ပုံမှန်အားဖြင့် Cotweet) သည်အကောင့်မျိုးစုံကိုကိုင်တွယ်ရန်၊ cotagging ပြုလုပ်ခြင်း စာရေးသူ၏အတိုကောက်နှင့်အတူ post, အကောင့်မျိုးစုံ post နှင့်အချို့သောလုပ်ငန်းအသွားအလာ - အခြားကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး မှ tweet သတ်မှတ်ရန်စွမ်းရည်။ Tweet လုပ်တဲ့အချိန်မှာသတင်းစကားထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်။ SocialEngage သည် Salesforce ExactTarget မိသားစု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်!
Hootsuite သုံးစွဲသူမျိုးစုံ၊ အယ်ဒီတာများ၊ တွစ်တာအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အကောင့်မျိုးစုံ၊ အစီအစဉ်တင်ထားသည့်တွစ်တာများ၊ အကောင့်မျိုးစုံသို့တင်ခြင်း၊ စာရင်းအင်းများပါသော URL တိုတိုများပါဝင်သည်။ မင်္ဂလာပါ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အတိုကောက် URL ကိုပေးပို့သောအခါ Adsense ထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းပင်။
ဤအမျိုးအစားသည်အပြင်းထန်ဆုံးသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်မှပျောက်နေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအင်္ဂါရပ်, သို့သော်, တာဝန်များကိုသတ်မှတ်နှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းအဘို့အလုပ်ငန်းအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။
interရာဝတီ ပိတ်ထားတဲ့ beta ထဲမှာရှိနေပြီးဒီအချိန်မှာဖြေရှင်းချက်ကိုကြိုတင်ကြည့်လို့မရဘူး။ Howard က၎င်းတို့သည်တိုက်ရိုက်သွားရန်ပြင်ဆင်ရာတွင်အချို့သောပြthroughနာများမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အထက်ပါ package များနှင့်ကွဲပြားသည် Twinterface ကဘာကိုကမ်းလှမ်းရမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ် လက်ရှိတွင် Twinterface သည် Multi- account နှင့် Multi- user များကို၎င်းတို့၏လက်ရှိအင်္ဂါရပ်များအဖြစ်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။
၎င်းသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုမြန်ဆန်ရန်သေချာသည့်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Twinterface သည်အမီလိုက်နိုင်ရုံမျှမကအချို့သောအခြေခံကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူစားပွဲပေါ်သို့တက်နိုင်သည်။
တွစ်တာကိုစောင့်ကြည့်ရန်ကြိုးစားရန် Google Alerts ကိုတပ်ဆင်ထားသူမည်သူမဆိုမကြာမီသတိပေးချက်များသည်မလာကြတော့သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သောအခါအချိန်သည်နောက်ကျလွန်းနေသည်။
ထို့အပြင်မရေမတွက်နိုင်သောအကောင့်များနှင့်ရာပေါင်းများစွာသောတွစ်တာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ညံ့ဖျင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများသည်မကြာမီတွင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ Radian6 တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် လူမှုမီဒီယာဂုဏ်သတင်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု လူမှုမီဒီယာအရင်းအမြစ်များအားလုံးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းအပါအ ၀ င်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။
Radian6သည်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းကို Webtrends နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်တက်လှမ်းနေသည် အဖြစ်ကောင်းစွာ။ ပြင်ပတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအဖြစ်အပျက်များနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပေါင်းခြင်း analytics စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကြီးမားသောဖြစ်လိမ့်မည်။
အကယ်လို့သင်က Twitter ကိုသာမကအခြား 40 ကွန်ရက်များသို့တင်ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်၊ မင်္ဂလာပါ သင့်အတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် Ping.fm တွင်သင်၏လူမှုရေးကိရိယာများကိုမိုဘိုင်းနှင့် SMS၊ အီးမေးလ်နှင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ပါရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောစာတိုပေးပို့မှုကိုလည်းပေးထားသည်။
Ping.fm သည် Social Media ရှိ messaging automation ၏ swiss Army ဓါးဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီ post မှာဖော်ပြထားတဲ့ applications တွေထဲကတစ်ခုကတော့ဒီ application ကစီးပွားရေးတစ်ခုမှမရှိစေသင့်ပါဘူး။
သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားလုံခြုံစိတ်ချရသောအတွင်းပိုင်းမိုက်ခရိုဘလော့ဂ်ပြုလုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်တစ်ခုဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသည်ဆိုပါစို့။ စျေးကွက်ထဲသို့လျှောက်လွှာအသစ်များနှင့်အတူသင်လုပ်နိုင်သည်။
ထိုအဆိုအရ လူမှုရေး site ကို:
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ Socialcast သည်သုံးစွဲသူများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောဖောက်သည်များနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအတွက်လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များပလက်ဖောင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကို ဦး ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား Irvine တွင်အခြေစိုက်သည် Socialcast သည်ကိုယ်ပိုင် self-service ကော်ပိုရိတ်လူမှုကွန်ယက်အသိုင်းအဝိုင်းများ၏တစ်ခုတည်းသော SaaS ပံ့ပိုးသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည် ၀ န်ထမ်းများအားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဗဟုသုတတိုးချဲ့ရန်၊ ဖန်တီးရန်နှင့်မျှဝေရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်လူမှုဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ရိုးရာအင်ထရာနက်အင်္ဂါရပ်များကိုပေါင်းစည်းထားသည်။
Socialcast မှထူးခြားသောအရာသည်မေးခွန်းများမေးရန်နှင့်ဖြေကြားရန်စွမ်းရည်ရှိပြီးကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးမားသောအတွင်းပိုင်းဗဟုသုတအခြေခံကိုဖန်တီးပေးသည်။ Socialcast သည် Social Business Intelligence ကိုလည်းပြောဆိုသည်။ ၏ suite ကို analytics tools များ - သို့သော်အမြင်အာရုံသည်မည်သည့် intelligencia တွင်မဆိုပေါ့ပါးသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောအစီရင်ခံစာတစ်ခုနှင့် ပို၍ တူသည်။
ထိုအဆိုအရ Yammer site ကို:
၀ န်ထမ်းများကထိုမေးခွန်းအားဖြေကြားသည်နှင့်အမျှ feed တစ်ခုသည်ဗဟိုနေရာတစ်ခုတွင်ဖန်တီးထားသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အတွေးအခေါ်များကိုဆွေးနွေးရန်၊ သတင်းများတင်ရန်၊ မေးခွန်းများမေးရန်၊ လင့်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်ဖြစ်သည်။ Yammer သည် ၀ န်ထမ်းတိုင်းတွင်ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်ရှိပြီးကုမ္ပဏီ၏လမ်းညွှန်အဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်ပြီးအတိတ်စကားဝိုင်းများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Present.ly သည်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအား ၄ င်းတို့၏လက်ရှိအခြေအနေကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ မေးခွန်းများမေးခြင်း၊ ဖြေခြင်း၊ မီဒီယာဝေမျှခြင်းနှင့်အခြားအရာများကိုတွစ်တာမှစတင်ခဲ့သောတော်လှန်ရေးဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်ကိုပေးသည်။
လက်ရှိတွင်အဖွဲ့များ၊ Attachments နှင့် Twitter နှင့်လိုက်ဖက်သော API တို့အပါအဝင်အလွန်အားကောင်းသည့်စွမ်းရည်များရှိသည်။
တွစ်တာတွင်ပေါ်နေသောအခြားကြော်ငြာလုပ်ငန်းများနှင့်မတူသည်မှာ Twitterhawk သည်ကုမ္ပဏီများကိုအသုံးပြုသူများကိုသော့ချက်စကားသို့မဟုတ်စကားစုအပြင်ပထဝီအနေအထားအရတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်စေသည်။ ဤသည်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်ရှည်လျားစွာစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးစနစ်၏အင်္ဂါရပ်များကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။
ဤအင်္ဂါရပ်များကိုအီးမေးလ်အသိပေးချက်များ (စနစ်ကတွစ်တာပို့သည့်အချိန်တိုင်း) နှင့်အတိုကောက် URLs များကိုခြေရာခံနိုင်ခြင်း (ဥပမာ - Hootsuite), ဤသည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလျှောက်လွှာပါလိမ့်မယ်!
မှတ်ချက် - ၅/၁၃/၂၀၀၉ Twitter သည်သင်မလိုက်နာသောသူများအား (@) တုန့်ပြန်မှုများကိုပြသခဲ့သည်Twitterhawk သည်တုန့်ပြန်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
တွစ်တာတွင်မည်သည့်အဖွဲ့ ၀ င်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသော်လည်းသင်အားသာချက်ယူနိုင်သည် ချစ်သူ အဆိုပါအားနည်းချက်ကိုကျော်လွှားရန်။ GroupTweet သည်အဖွဲ့ကိုသီးသန့်သီးသန့်ထုတ်လွှင့်ထားသော Twitter မှတစ်ဆင့်အဖွဲ့ ၀ င်များကိုသာမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်ခွင့်ပြုသည်။
တွစ်တာအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ application အဖြစ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မြှင့်တင်ရန်ကိရိယာအနည်းငယ်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အများစုသည်အင်္ဂါရပ်များအပေါ်တော်တော်လေးပေါ့ပါးသည်။ မည်သည့်ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်မဆို analytics နှင့်အလိုအလျောက်တစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ခုထည့်သွင်းသောအင်္ဂါရပ် စီးပွားရေး twitter application သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၏လူမှုမီဒီယာကြိုးပမ်းမှုများအပေါ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
Tags: အိပ်ယာခင်းsocialtage exacttargetချစ်သူHootSuiteping.fmမကြာမီradian ၆လူမှုရေးလူမှုရေးနေခြည်ချစ်သူYammer
jQuery ကို သုံး၍ ဂူဂဲလ် Analytics စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး Querystring ကိုဖြည့်စွက်ပါ
မေလ 11, 2009 မှာ 5: 29 pm တွင်
Radian6 အကြံပြုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာမည်မျှသောကိရိယာများ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်လူတို့၏အာရုံကိုအာရုံစိုက်ရုံသာမကသူတို့၏ပါ ၀ င်မှုအားစီမံခန့်ခွဲရန်ကြိုးစားနေသည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်အတွက်အပြုသဘောသက်သေပြ ဒါကကောင်းတဲ့အရာပဲ။
ဒစ်ခ် Morgan CMC, FIMC
မေလ 12, 2009 မှာ 11: 12 AM
တွစ်တာအကြောင်းကောင်းတဲ့အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါကလေ့လာသူတစ်ယောက်ပါ။ ဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းပစ္စယငါ့ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရွှေ့ကူညီပေးသည်။
ဇွန် 25, 2009 မှာ 12: 11 pm တွင်
ကောင်းတဲ့ပို့စ်! အဲဒီမှာထွက်ရှိအေးမြ tools များနှင့် app များကိုဤမျှလောက်များစွာသော။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကိရိယာတန်ဆာပလာအတိအကျမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျနှစ်သက်သည် Ref.ly။ တွစ်တာတွင်ကျမ်းစာအခန်းငယ်များဝေမျှလိုသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
1:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 11
Radian6 နဲ့အတူကျွန်တော်အရမ်းအကြံပြုချင်ပါတယ် backtweets, 'unshortens' URLs များနှင့်သင်၏ဆိုဒ်များကို Twitter တွင်ပြုလုပ်သောအခါသင်သတိပေးနိုင်သည့် application တစ်ခု!